Ahoana ny fambolena sary amin'ny Photoshop, video tutorial | Famoronana an-tserasera
Adobe Photoshop dia fitaovana lehibe fantatry ny rehetra sy izany havaozina isan-taona izy io avy amin'ny Creative Cloud. Ireo fanatsarana ireo dia avy amin'ny lafiny rehetra ary mifantoka amin'ny lafiny sasany. Misy faritra sasany izay tsy nokasihina hatry ny ela, fa ny hafa kosa manohy manavao toy ny nanjo ilay fikandrana antontan-taratasy vaovao.
Androany isika handeha jereo kely ilay Snipping Tool izay mijanona ho toy ny taloha ihany, na dia ampitahainay amin'ny kinova taloha an'ity programa angano ity aza dia nisy fanatsarana natao mba hojerena. Ka andao hojerentsika amin'ny alàlan'ny horonan-tsary sy fomba fohy momba ny fomba famokarana sary ao amin'ny Photoshop.
Crop sary ao amin'ny Photoshop
Tsy handeha amin'ny antsipiriany be loatra aho ary, araka ny filazanao, andao ho tonga amin'ilay teboka. Tsy maintsy milaza an'izany aho Azontsika atao ny manararaotra tombony fanampiny sasany ananan'ny fitaovana cropping, toy ny fahaizana misafidy ratio mialoha, toy ny 1: 1 ho an'ny fanapahana ny tambajotra sosialy toa ny Facebook na Instagram, na ny fampiasana karazan-tsipika iray hiatrehana tsara kokoa ireo fanapahana hataontsika amin'ny Photoshop .
Tsindrio ny bokotra C hiditra amin'ny Snipping Tool.
Eo ambony manana ny fanampiny bar izay ahitantsika ny endrika voalaza (1: 1 na 16: 9 amin'ny panoramic) ary ny mety hanampiana valan-tsipika hafa amin'ilay iray tonga amin'ny alàlan'ny tsipika misy tsipika mitsivalana sy roa mitsivalana.
Raha tsy te hampiasa ny iray amin'ireo safidy ireo izahay ary te-hisafidy endrika fametahana kapila omena, tsindrio ny sora-baventy rehefa manao ny safidy.
Tsindrio ny enter, ary hataontsika vita ny clipping.
Afaka miverina amin'ny alàlan'ny fifehezana + z foana isika ary manao karazana fifantina hafa amin'ny fomba somary tsotra. Safidy iray hafa dia miverina amin'ny endrika mahazatra avy amin'ny bokotra boribory iray ihany ho hitanao eo akaikin'ny takelaka misy anao ary ahafahanao mampihetsika ny maody mahazatra, ampandehanana ny ampinga mitazona na asehoy ny faritra nokapaina.
Ny zava-drehetra dia resaka fitsapana mandra-pahatongan'ny andao hiatrika an'io interface io izay iarahantsika mihatsara kokoa ary afaka manararaotra tanteraka an'ity fitaovana lehibe ity ho an'ny famolavolana sy famerenana sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fambolena sary ao amin'ny Photoshop
Ataovy amin'ny sary Geometric ny sarinao